Faysal Cali Waraabe oo u gafay Xukuumadda Somalia iyo isaga oo amaanay Prof. Axmed Ismail Samatar – idalenews.com
Guddoomiyaha Xisbiga UCID Md. Faysal Cali Waraabe, ayaa soo dhaweeyay Prof. Axmed Ismaaciil Samatar iyo safarka uu ku joogo Magaallada Hargeysa.
Faysal oo la hadlay Warbaahinta Hargeysa ayaa waxa uu yiri,“Prof. Axmed Ismaaciil Samatar waan soo dhawaynayaa go’aanka geesinimada ah ee uu gaaray ee ah inuu yimaado Hargeysa islamarkaana uu iska casilay xubinimadii Baarlamaanka Somaliya’’sidaa waxaa yiri Faisal cali.
Dhanka kale, waxa uu sheegay in Xukuumadda Somalia ay tahay mid magac u yaal ah sida uu hadalka u dhigay isagoona sheegay in Prof Axmed Ismaaciil uu ku degdegay Aqoonsida hanaanka Dowladnimo ee iminka ka jira Somalia oo uu ku sheegay in Dowladda Somalia ay tahay mid meel aal ah.
‘’Prof Axmed wan amaanaya balse waxan kasoo horjeeda hadalkii ahaa in Xassan Sheikh uu yahay shaqsi u madaxbanaan fakirkiisa, taas waxa ay ka dhigan tahay in Samater uu qiraayo in Dowladda Somalia tashatay’’ sidaa waxaa yiri faisal Cali.
Faysal, wuxuu sheegay inuu si dadban ugu jiray soo dhawaynta Axmed Ismaaciil Samatar, “Anigu waan la socday muddooyinkii u dambeeyay doodaha uu kaga jiray dalka Maraykanka.”
Faysal, wuxuu ugu dambayn yiri, “Qofku marka uu wadankiisa ku soo noqdo ee uu xaqiiqada arko lama dhibaateeyo ee waa la soo dhaweeyaa laguna ammaanaa. Markaas Axmed wuu ku ammaananyahay xaqiiqda uu soo arkay.”